Phobia (2016)ြ IMDb 7.0 ရထားတဲ့ Thrill ဘောလိဝုတ်ကား တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးက တော့ အရင် အတိတ်ဘ၀ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို စိတ်စွဲလန်းပြီး ဥပါဒ်ဒဏ်ကြောင့် ဥပါတ်ရောက်ဆိုသလိုပဲ စ်ိတ်ထင်ရာကိုစွဲလန်းမိပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ပျက်ရပုံတွေကို ရိုက်ကူးပြထားတာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ကောင်မလေးတယောက်ဟာ ပါတီပွဲတစ်ခုမှာ အပြောင်အပျက် သူမဟာ အရင်ဘ၀က ခွေးဖြစ်ခဲ့ပြီး မထင်မှတ်ထားပဲ ကားကြိတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း မယုံလျှင် လည်ပင်းမှာ အရင်ဘ၀က အမှတ်အဖြစ် ကားကြိတ်ခံခဲ့ရသော ဒဏ်ရာကို အမှတ် အဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားပြီး နောက်ပြောင်ခဲ့ရာမှ ထို အရာတွေဟာ တကယ်ပဲဖြစ်ပျက်လာလေ မလားဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက် ကြည့်ရှူရမှာဖြစ်ပါတယ်Download On Vip Link 720p/360p
Phobia (2016)ြ
Dishoom (2016) ဒီတစ်ခါတော့ CM ပရိတ်သတ်တွေ တောင်းဆိုမှုများနေတဲ့ Bollywood ဟာသ အက်ရှင် စွန်းစားခန်း တွေပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇတ်လမ်းအစမှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အတော်ဆုံးခရစ်ကတ်ကစားသမားဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းသွားရင်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် မင်းသားချော John Abraham နဲ့ ရဲငပေါ အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Varun Dhawan တို့အဖွဲ့ဟာ အဖမ်းဆီးခံ ခရစ်ကတ် ကစားသမားကို ၃၆ နာရီအတွင်းဘယ်လို ရှာဖွေပြီး ဘယ်လိုဖမ်းမိမလဲ ? ခရစ်ကတ်သမားကို ဖမ်းထားတဲ့ လူဆိုးကလည်း ဘယ်လိုနိပရိယာယ်တွေသုံးပြီး ရဲတွေကို လှည့်စားမလဲ ? ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး အိန္ဒိယ ခရစ်ကတ်ကစားသမား ပြောသွားတဲ့စကားကတော့ "ကျွန်တော့်မိဘတွေက ဘာဘာ/ညာညာဖြစ်ဖို့ ဘယ်တော့မှမမှာဖူး တိုင်းပြည်ကိုသစ္စာမဖောင်ဖို့ပဲမှာတယ်" ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲ 2016 မှာထူးထူးခြားခြား ကြည့်ရမဲ့ ဟာသ အက်ရှင် စွန်းစားခန်းတွေပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်တာမို့ ခုပဲဒေါင်းကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ ???? File Size : 1GB Quality : Blu ray 720P Running Time : ...
Love O2O (2016) ကျန်းရွှေဝူးရှန်း အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုတွင် အဆင့်(၇)ရရှိထားသော လူဝေဝေ့ဝေအဖြစ်Computer မေဂျာရဲ့နတ်သမီး ...ဂိမ်းသရဲမလေး ... ပေဝေဝေ.....။ထိုဂိမ်းတွင် ထိပ်တန်းဇာတ်ကောင်ဖြစ်နေသော ရီရှောင်းနိုင်ခဲ အဖြစ်Computer ဆရာကြီး ...ဘက်စုံထူးချွန်.. ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်.. ရှောင်းနိုင်....။သူတို့နှစ်ယောက် မြင်မြင်ချင်း ချစ်ကြိုက်မိသောအခါ Love O2O (Love online to online) ဇာတ်ကားဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းက စီးရီးအနေနဲ့လဲ ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Movie နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်သူတွေ စီးရီးကို ထပ်ကြည့်ကြပါကုန်။ရှောင်းနိုင်အဖြစ်...Jing Boranပေဝေဝေအဖြစ်...Angelababy တို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။(Sid Moe Eain မှခံစားတင်ဆက်ထားတာပါ။) File size…(900MB) Quality…WEB-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:43:29 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Download and Watch 720p and 360p (VIP Link) (or) Download 720p HD (900MB) Download 360p(360MB)
Tere Binladin2Dead or Alive (2016) ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ခပ်မြူးမြူး ဟာသ ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးကတော့ ဘင်လာဒင်သေလား မသေလားကို ပြောင်ပျက်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး တကားလုံး မရိုးရပဲ ခပ်မြူးမြူးကားလေးဖြစ်တာမို့ ပါးစပ်မပိတ်ရပဲကြည့်ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဘောလိဝုဒ်ဒါရိုက်တာကို အမေရိကန်အေးဂျင့်က ငှားရမ်းပြီး ဘင်လာဒင်သေလား မသေလားကို သက်သေပြဖို့အတွင် လိမ်လည် ခေါ်ယူရာမှ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှူ့ကြရမှာပါDownlaod On Vip Link Download On Pcloud Large File Size Download On Pcloud Small File Size is still uploading
Tere Binladin2Dead or Alive (2016)
Risen (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲ ဒီညအတွက်ကတော့ ရောမခေတ် AD 33 လောက်ကို အခြေခံထားပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့ရစေ ဇကားလေး ကတော့ အေဒီ ၃၃ မှာ Bible လာ ဗျာဒိတ်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ ကောလဟာလတစ်ခုကို အဖြေရှာဖို့ ရောမ စစ်သူကြီးနဲ့ သူ့တပည့်တို့ဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်လာမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပိုင်းအစ တစ်ခုကို ပြန်လည်ရှာဖွေဖို့ လိုက်လံစုံစမ်းကြရာမှ တကယ်ပဲ တွေ့ရှိပြီး အဖြစ်မှန်ကို ဖော်ထုပ်နိုင်မလား ဗျာဒိတ်တောင်ကကော မှန်ကန်မှုရှိနေသလားကို ပရိတ်သတ်ကြီးကပဲ ဆက်လက် ကြည့်ရှူလိုက်ပါတော့ဗျာ (စကားကျွင်း - ကျတော်လဲ ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး သိပ်နားမလည်တာကြောင့် နားလည်သလိုရေးထားတာမို့ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာ)Download VIP Link Download Large FileSize On Pcloud Download Small File Size On Pcloud
Risen (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Azhar (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB-6.1 ဒီကားကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ခရစ်ကတ်ကစားနည်းသမိုင်းမှာ အစောဆုံးနာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက်အက်ဇ်ဟာရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ အတ္ထုပတ္တိကားတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်ခြားတစ်ခြားသော Sport Biographical Movie တွေလိုပဲ ငယ်စဉ်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ၂၀၁၆ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိကားကောင်းတစ်ကားလည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် ဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စီအမ်က ဘောလိဝုဒ်ကားတွေ ဓာတ်ကျနေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ... ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီကားကိုလည်း စီးမျောခံစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ...... (ဇာတ်လမ်းအညွန်းကို ကိုကို Ye Khant Min မှ ရေး ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်) File size…(850 MB) Quality…720p Bluray Format…mp4 Duration….01:30:30 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder…. Thanhtike ZawDownload Here (850 MB) Download Small File Size (450 MB)
Ghayal Once Again (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB-6.8 Rotten Tomatoes-78% Ajay တစ်ယောက် သူငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကနေ ရှင်းပြီးနောက်မှာ... သတင်းစာတိုက်မှာ သတင်းထောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတော့တယ် အဲဒီမှာ သူ့ရဲ့ အကြောက်အရွံ့မဲ့မှုတွေ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် သူ့ကိုကြိတ်လေးစားနေတဲ့ အမာခံဖန်လူငယ်လေးယောက်ရှိပါတယ် တစ်နေ့ အဲဒီလူငယ်လေးယောက်က သတင်းလိုက်ရင်းသူတို့ရဲ့ကင်မရာမှာ လူသတ်မှုတစ်ခုပါလာတော့တဲ့အခါ... ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့လူတွေကလည်း မြို့ရဲ့ အာဏာအကြီးဆုံးလူနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ... ကိုယ့်ဘက်မှာ အမှန်တရားပဲရှိတယ် သူ့ဘက်မှာက ငွေအားလူအားနဲ့ ဥပဒေကို ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်တယ် အဲ့အချိန်မှာ အမှန်တရားကို မြတ်နိုး.အကြောက်အလန့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ Ajay အနေနဲ့ ဘယ်လိုများရင်ဆိုင်မလဲ နိုင်ရောနိုင်ပါ့မလား... ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကိုသိချင်ရင်တော့... ဒီ RottenTomatoes က Best Movie လို့ပြောပြီး 78% ရထားတဲ့ကားမှာ ဆက်လက်ရှုစားကြရအောင်ဗျာ... (ဇာတ်လမ်းအညွန်းကို ရဲခန်.မင်းမှရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်) File size…(840MB) Quality…720p Bluray Format…mp4 Duration….02:07:30 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Thanhtike ZawDownload Here (850 MB) Small File Size (450 MB)
Vigilante Diaries (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Vigilante Diaries ဇာတ်ကားက Rating 5.3 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ၉၀ပြည့်နှစ်များက သူရဲကောင်းတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းပါ ဒီဇာတ်ကားမှာ လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့ အေးဂျင့်တွေဟာ ရာဇဝတ်သားဘဝကိုရောက်သွားတဲ့ ပုံမျိုးတင်ဆက်ထားတာပါ ရသစုံစုံလင်လင် ခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထွေထွေထူးထူး ပြောနေစရာမလိုလောက်အောင် ကောင်းတဲ့ကားလေးပါ Jason Mewesနှင့် Paul Salonတို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ Christian Sesmaဖြစ်ပါတယ် (ဇာတ်လမ်း အညွန်းကိုတော့ မမ Bommy Chan မှရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်) File size…(750 MB) Quality…720p Bluray Format…mp4 Duration….01:48:30 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder…. Arkar PhyoDownload Here (750 MB)
Traffic (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီနှစ်မှထွက်တဲ့ ဘောလိဝုဒ်ကားတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ဒီကားထဲမှာတော့ ပရိတ်သတ်တွေသိလောက်တဲ့ တော်တော်ကြီးကို ရင်နှီးနေမယ့် မင်းသား မင်းသမီးတွေပါဝင်ထားပါတယ် ဒီကားက တကယ်တော့ ချင်းနိုင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးကို တုန်လှုပ်ခြောက်ချားသွားစေခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို မှီငြမ်းရိုက်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရှင်းပါတယ် နာမည်ကြီးစူပါစတားတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးလေး နှလုံးရောဂါဖြစ်လို့ ခွဲစိတ်ကုသရတော့မယ့် အချိန် နှလုံးအစားထိုးဖို့ရှာနေတဲ့အချိန် သူနဲ့ကိုက်တဲ့နှလုံးရလာတော့ အချိန်ကလည်းကပ်နေပြ ဘယ်လိုမှပို့ပေးလို့မရတဲ့အချိန်မှာ တစ်နာရီကို ၁၂၀ကီလိုနှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှုပ်ဆုံးလမ်းတွေထဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မွန်ဘိုင်းလမ်းတွေပေါ်မှာ မောင်းရဖို့ ကြုံလာတော့အခါ... ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ဒါပေမယ့် ဒီကားကပေးသွားတဲ့ အတွေးလှိုင်းဂယက်တွေကိုတော့ ချုပ်ထိန်းလို့မရစေရဘူးလို့ အာမခံနိုင်ပါတယ် တွေးစရာတွေ plot တွေ အများကြီးချန်သွားခဲ့တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါလို့... (ဇာတ်လမ်းအညွန်းကိုတော့ ရဲခန်.မင်းမှ ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်)File size…(800MB) Quality…BR-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:44:56 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Thanhtike Zaw
Mechanic: Resurrection (2016) Mechanic: Resurrection (2016)_____IMDb - 5.7/10 အားလုံးမြျောလငျ့စောငျ့စားနတေဲ့ ဇာတျကားလေးတဈကားတော့ ပရိသတျရှမှေ့ောကျကို ပို့ပေးလိုကျပါပွီ။ မက်ကငျးနဈလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ ဂဆြေနျစတသေနျကို အားလုံးပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ အပိုငျး၁ကတော့ ထှကျထားတာ နဈအနညျးငယျကွာခဲ့ပါပွီ။ ကွေးစားလူသတျသမားတဈဦးရဲ့ စှနျ့စားမှု၊ ဉာဏျကိုလှာသုံးတတျမှု၊ အကှကျမွငျတတျမှုကို အတိအကရြိုကျကူးနိငျခဲ့တာကွောငျ့ အပိုငျး၁ဟာ ပရိတျသတျတှအေားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိခဲ့ပါတယျ။ ခုတော့ပရိတျသတျတှမြှေျောလငျ့နတေဲ့ မက်ကငျးနဈအပိုငျး၂ကို ပရိတျသတျတှဆေီ အရောကျပို့ပေးလိုကျပါပွီ။ ဘယျလောကျပဲသှေးအေးတဲ့ လူသတျသမားဖွဈလငျ့ကစား အခဈြအတှကျဆိုရငျ ဘာမဆိုလုပျရဲတဲ့ ဇာတျကောငျဘဈရှော့အဖွဈ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဟီးရိုးကွီးကိုမွငျတှရေ့မှာပါ။ မိမိခဈြတဲ့မိနျးကလေးကို ဓါးစားခံလုပျပွီး အလှနျပငျအာဏာကွီးမားတဲ့ ဒုစရိုကျခေါငျးခေါငျးဆောငျ၃ဦးကို လုပျကွံခိုငျးတဲ့အခါမှာ ဘဈရှော့ဘာတှလေုပျမလဲ? ထိုဂိုဏျးခေါငျးဆောငျ၃ဦးကို လုပျကွံဖို့ ဘာတှကွေံစညျမလဲ? တဈကြှနျးကနြသေညျ့ ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျကိုတဈကြှနျးထိလိုကျလံ လုပျကွံသညျ့ဘဈရှော့ရဲ့ စှနျ့စားခနျးတှကေို ရငျသပျရှုမောဖှယျ မွငျတှရေ့အုံးမှာပါ။ သခြောပါတယျ ပရိတျသတျတှလေကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဇတျကားကောငျးတဈကားလို့ ခိုငျခိုငျမာမာပွောရဲပါတယျ။ File Size : 707 MB Quality ...
Ghostbusters (2016) Ghostbusters (2016) IMDb - 6.5/10_____Rotten - 74% 2016 ထှကျမယျ့ ရုပျရှငျတှထေဲမှာ ကွညျ့ခငျြနပေမေယျ့ သိပျတော့မြှျောလငျ့မထားတဲ့ ရုပျရှငျတဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ Ghostbusters ပါပဲ။ တစ်ဆဖေမျးသူမြားပေါ့။ Rating ကလညျး 6.5 ပါ။ မနကေ့ ထှကျလာတော့ ကွညျ့လိုကျမိတဲ့အခြိနျမှာ နညျးနညျးတော့ အံ့အားသငျ့သှားမိတယျ။ ဇာတျလမျး အဖှငျ့ အလညျ အဆုံးက ကနြေပျစရာလေး ဖွဈနလေို့ပါပဲ။ အဖှငျ့မှာ နိဒါနျးပြိုးသှားပုံလှတယျ သူတို့ အဖှဲ့ကို အလညျမှာ တညျဆောကျသှားတာ အသကျဝငျတယျ အဆုံးမှာ ကနြေပျစရာ တိုကျခိုကျမှုတှနေဲ့ ဇာတျသိမျးရလိုကျတယျလို့ ပွောရမယျထငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Thor နဲ့ Huntsman ကားတှရေဲ့ သရုပျဆောငျကွီးက ဒီကားမှာ သူ့ကိုတှတေို့ငျးရယျနရေအောငျ ကောငျးကောငျးအစှမျးပွသှားတယျလို့လဲ ပွောလို့ရမယျထငျပါတယျ။ ငယျငယျက တစ်ဆသေရဲနဲ့ ပတျသတျတာတှကေို ယုံကွညျပွီး စာအုပျတဈအုပျတောငျ အတူရေးခဲ့တဲ့ အခဈြဆုံး သူငယျခငျြး ၂ ...